MDC Yoramba Mashoko eNyaya Yekodzero Dzengochani
MDC-T inoramba mashoko ekuti yaida kupinza nerweseri nyaya yekodzero dzengochani mubumbiro remitemo idzva
MDC inotungamirirwa naVaMorgan Tsvangirai yaramba mashoko ekuti yaida kupinza nerweseri nyaya yekodzero dzengochani mubumbiro remitemo idzva riri kunyorwa.
Mutauriri weMDC-T uye vari mumwe wemasachigaro eCOPAC, VaDouglas Mwonzora, varamba mashoko ari mubepanhau reThe Herald yekuti COPAC yakarasa nyaya yekuti kodzero dzengochani dzive mubumbiro idzva iri.
VaMwonzora vaudza Studio 7 kuti hapana pakambotaurwa nyaya dzengochani pakasangana komiti inoona nezvesarudzo vhiki rapera. Vati zvakakurukurwa nezvazvo zvaive zvekutsvaga nzira dzekucherechedza kodzero dzemarudzi akafanana nemaTonga, maVenda, maShangani, vechiNambya pamwe nevechirungu nemaIndia avo vavati vashoma munyika.
”Hatina kumbobvira tataura nyaya dzengochani, uyezve ini pachangu handizivi kuti ngochani dzacho ingani muZimbabwe muno. Saka handikwanisi kutaura kuti izhinji kana kuti ishoma. Handiyo nyaya yaitaurwa musivacho iwoyo...kunyepa kweHerald nezvidhakwa zvemuZANU PF zvetinoshanda nazvo," VaMwonzora vadaro.
Mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzengochani, reGays and Lesbians Association of Zimbabwe, GALZ, VaChesterfield Shamba, vati sangano ravo riri kurwirwa kuti kodzero dzengochani dziremekedzwewo mubumbiro idzva iri.
Hurukuro naVa Chesterfield Shamba